Imifino yokushintsha kwesimo sezulu i-Antarctica | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunzima ukucabanga ukuthi izwekazi elibanda njenge-Antarctica, lapho kubhalwa khona amazinga okushisa aphansi kakhulu emhlabeni, lingaba nezitshalo ezinkulu, akunjalo? Kepha ukuguquguquka kwesimo sezulu kukuvumela lokho nje. Esigamekweni sokugcina umsebenzi wezinto eziphilayo uye wanda, ngokusho kocwaningo olushicilelwe encwadini ethi 'Current Biology'.
Ngabe izwekazi lizoba luhlaza njengoba kwenzeka eminyakeni eyizigidi ezingama-52 edlule?
Ucwaningo, olwenziwe yiqembu lososayensi abavela emaUniversity of Exeter naseCambridge (UK), kanye neBritish Antarctic Survey, iphakamisa ukuthi lo mbono awukho kude njengoba wawunjalo kwaze kwaqala iNguquko Yezimboni futhi abantu baqala ukuba nomthelela omkhulu emvelweni.
Ngo-2013, iqembu labacwaningi lagxila ekuhlaziyeni ama-cores of mosses atholakala echosheni eliseningizimu yeNhlonhlo Yase-Antarctic. Bese bethola ukuthi kwenzeka ushintsho olukhulu emvelweni. Manje, Ngokuhlaziya ezinye izindawo ezinhlanu, sekuqinisekisiwe ukuthi lolu ushintsho olujwayelekile.
I-Antarctica ingenye yezindawo lapho kuthinteka kakhulu imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Izinga lokushisa lenyuke cishe ngo-0,5ºC ngeminyaka eyishumi kusukela ngo-1950. Uma lokhu kuqhubeka, njengoba iqhwa liyancibilika kuzoba nomhlaba omkhulu mahhala, ngakho-ke cishe kuzoba yisifunda esiluhlaza kakhulu ngokuzayo.
Okwamanje, impilo yezitshalo kule ngxenye yomhlaba itholakala kuphela cishe ku-0,3% wezwekazi; Noma kunjalo, Ukuguquka kwesimo sezulu kuyiguqula ibe luhlaza. Yini engenzeka ngokuzayo? Ukuthola, abacwaningi bazohlola amarekhodi ezinto eziphilayo aqala eminyakeni eyizinkulungwane edlule. Ngakho-ke bangathola ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kwabathinta kanjani esikhathini esedlule.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imifino yokushintsha kwesimo sezulu i-Antarctica